Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား
1 Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 8th December 2009, 1:58 pm
Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား။ 08.12.2009 နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ MITR Forum ကြီးဟာ Register User ပေါင်း 999 ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ဆိုရင် ၁၀၀၀ ပြည့်ပါပြီ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ MCO မှာလိုပဲ အပြင်မှာ Gathering လေးလုပ်လိုက်ရအောင်ဗျာ။
ဘယ်လိုသဘောရကြလဲ။ ကျွန်တော်တို့ Forum မှာဂုဏ်ယူစရာအချက်တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုရင် တခြား ဖိုရမ်တွေမှာလို ရန်မများခြင်း၊ ပြီးတော့ QQ အကန့်တွေမပါခြင်း စသည်ဖြင့်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အပြင်မှာတစ်ရက်လောက်တွေ့လိုက်ကြရင် မကောင်းဘူးလား။ ပြီးတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါ လိုမျိုး တနင်္ဂနွေ လိုရက်မျိုးမှာပေါ့ ရွှေတိဂုံမှာ တနင်္ဂနွေ ဝေယျာဝစ္စအသင်းလိုမျိုးတွေ
မှာပါဝင်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ မန်ဘာ ချင်း ရင်းနှီးမှုတွေပိုများလာပြီး Forum အကျိုးကို ဆထက်ထမ်းပိုး လုပ်နိုင်မလား? ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာကိုပြောတာပါ။ အားလုံးရဲ့အမြင်ကိုလဲ ပြောပါဦး။
2 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 8th December 2009, 3:00 pm
ပွဲကို ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက်တော့ ကျနော်က Experience မရှိလို့ဗျာ။ လုပ်ဖူးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် ရှိရင် နည်းနည်းလောက် ကူညီပါလား။
ကျနော်လည်း Project တစ်ခုလုပ်နေတာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါ။
/-tt@Ck3r နဲ့ ကောင်းသလို စီစဉ်ထားလိုက်ပါ။
“Attacker လည်း လိုအပ်ရင် ငါ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပါ” မင်းဆီကိုက ဆက်လို့မရလို့
3 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 8th December 2009, 5:41 pm
နယ်မှာဆိုတော့ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒါနဲ့ $ƴǩǾ အစ်ကိုအစ်ကိုပုံလန်းလန်းလေးတွေတွေ့ထားတယ်
4 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 8th December 2009, 6:12 pm
ကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုပါ ... ကျွန်တော် တို့ကတော့ လာလို့ရ၀ူး ..ဖြစ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 8th December 2009, 8:29 pm
6 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 9th December 2009, 3:30 pm
٨††∂¢қєř wrote: ဒီလိုတွေ့ဖို့ကိစ္စကိုတော့ ကျနော်တို့ဘက်က စီစဉ်မှာပါ။ အခုလောလောဆယ်ဆို မန်ဘာက ၁၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီ။ အောင်မြင်စပြုနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ဘက်မှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး တကယ့်ကို အများကြီးပါ။
ငါလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ပေးနေတာပါဘဲလေ။ လောလောဆယ်တော့ ဟို Project ကို စလိုက်တော့ ဖိုရမ်အတွက် အနည်းငယ်တော့ လစ်ဟင်းမှုရှိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခြားနေရာကနေ ကော်ပီ ပေစ့်ဆွဲပြီး စာတွေကို တင်ကြည့် အပြည့်မပေါ်ဘူး။
တစ်နေရာမှာ ပြတ်ပြီး အောက်ကိုဆင်းဆင်းသွားတယ်။
နောက် အက်ဒမင် မောဒ့် ဂျေမောဒ့်တွေရဲ့ နာမည်ကို ကော်ပီဆွဲပြီး ပေစ့်လုပ်ကြည့်
အဲဒီ့တော့ အဲဒါတွေ ပြင်ပေးရမှာလားဟင်။ အောက်တစ်လိုင်းဆင်းတာကို ငါပြင်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဟို [b] ပေါ်နေတာတွေကလည်း တကယ်ဆို ပြင်လို့ရတယ်။ WYSIWYG ဆိုတာ ဖြုတ်လိုက်ရင် ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မန်ဘာတစ်ယောက်က လင့်ကိုလာတောင်းတယ်၊ ကျနော်တို့ဘက်ကမပေးနိုင်ဘူး။ လက်ပိုက်ကြည့်နေရတယ်။
ဘယ် Link ကို လာတောင်းရင် ငါတို့က မပေးနိုင်တာလဲ??? Link ချိန်းခိုင်းတာတွေကိုလား။ Link ချိန်းခိုင်းရင်တော့ ငါအမြဲချိန်းပေးပါတယ်ဟ။ အားရင်အားသလိုပေါ့။
တွေ့တာကတော့ ဒီလထဲမှာ တစ်ခေါက်လောက်တွေ့ကြပါမယ်။ ကို ဇီးရိုး ပြောသလိုပါပဲ။ ဂုဏ်ယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်ခြားဖိုရမ်တွေလို လိုင်းမကြောင်ပါဘူး။ အိုင်တီ တစ်လမ်းထဲကိုပဲ လိုက်တာပါ။ ဒီလိုဖိုရမ်တစ်ခု တက်လာတယ်ဆိုတာကလည်း လွယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တွေ့မယ့်ကိစ္စအသေးစိတ်ကိုတော့ အေးဆေးတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ဗျာ......။
တစ်ခုစဉ်းစားရမှာကတော့ မန်ဘာတွေပါ ပါဝင်ခွင့်ပေးမလား ဒါမှမဟုတ် အက်ဒမင်ပိုင်းပဲလုပ်ကြမလား။ အဲဒါအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကိုအားလုံးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ တစ်ခြားကိစ္စတွေဆက်သွားကြတာပေါ့။
တွေ့ချင်ရင်လည်း စနေ ၊ တနင်္ဂနွေဘဲ လုပ်ကြနော်။
ဖိုရမ်ထဲမှာ တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာ အကောင်းဆုံး တစ်ချက်ရှိတယ် အဲဒါကတော့ ဖိုရမ်ကို `လူကြီးများ မလေးစားသော ၊ လူငယ်များ မှ ဦးဆောင်နေတာဘဲ´
အဲဒီ့လို ငါတို့ အသက်တွေကို လူတွေ သိနေတော့ ၊ မလေးစားကြတာလဲပါတယ်။
ဖိုရမ်အောင်မြင်တာတော့ တကယ်ကို ၀မ်းသာပါတယ်။
٨††∂¢қєř လေးရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေ အပြင် ၊ အားလုံးသော Mod တွေနဲ့ J-Mod များရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့် အောင်မြင်လာရတာပါ.
နောက်ထပ် ၂ လ အကြာမှာ ဖိုရမ်ရဲ့ နောက်ထပ် ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာအောင် ကျနော် ကြိုးစားနေပါတယ်။ (٨††∂¢қєř ကတော့ မပါဘူးတဲ့။ )
ဘာလဲဆိုတာတော့ ထွက်လာမှ ကြည့်ကြပေတော့။
7 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 9th December 2009, 3:40 pm
ဟေ့...အဲဒီလိုမျိုး တိုးလို့တန်းလန်းကြီး လုပ်မသွားပါနဲ့ဟ။
Hints လေးတော့ပြောပြပါ။ စိတ်ကူးနဲ့ရင်ခုန်လို့ရအောင်။ (မိန်းမရပြီးသွားတော့ ရင်ခုန်စရာက သိပ်မရှိတော့ဘူး)
8 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 9th December 2009, 3:44 pm
တအားသိချင်နေရင် Gtalk မှာ ပြောပြမယ်။
9 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 9th December 2009, 3:58 pm
ဟေ့အဲဒီလို ကြီး မလုပ်ကြပါနဲ့ အကြိုးအကြောင်းလေးတော့ ပြောပေါ့ ။
10 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 9th December 2009, 4:09 pm
Gtalk မှာ ပြောပြပါမယ်ဆို။
ဒါနဲ့ဘဲ ကုန်ပါပြီ။ လျှို့ဝှက်လုပ်ပါတယ်ဆို။ ဟိဟိ ကိုဇီးရိုး လည်း သိသွားဘီ။
11 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 9th December 2009, 4:34 pm
သိချင်လွန်းလို့ ဆရာသမားကို အွန်လိုင်းမှာအမိဖမ်းပြီး မေးလိုက်ရတာ ဟီး...ခုတော့သိသွားပြီ။
12 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 9th December 2009, 8:14 pm
ဟေ့ နာမတိသေးဘူးတွ ပြောဟီးရင်ခုန်လိုက်တာ
13 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား on 10th December 2009, 10:54 pm
လောလောဆယ် MITR mailing software ကလေးကို ပွဲထုတ်ကြည့်ပါလား
14 Re: Admin များ၊ Mod များ၊ J Mod များ ခင်ဗျား